Izibuko zelanga zezintaba | Amadoda aSitayela
U-Alicia tomero | | Ukunakekelwa komuntu siqu, Indlela yokuphila
Izibuko zelanga zezintaba Kuyinto ebalulekile ukuvikela amehlo ezintweni eziyingozi, njengemisebe ye-ultraviolet, umoya nanoma yiziphi izinhlayiya zothuli noma izinambuzane ezingamiswa.
Hhayi noma ngubani, kufanele bahambisane ngohlobo lwezintaba ozozijwayeza ngalo, ezinethezekile, ezingazweli futhi eziqinile, futhi nokuhambisana nedizayini evumelana kahle nobuso bakho. Ku-Men with Style sikucebisa ukuthi ungazikhetha kanjani izibuko zelanga ezihamba phambili zentaba.
1 Izici ezijwayelekile zezibuko zelanga zezintaba
2 Kungani izibuko zelanga zibaluleke kangaka ezintabeni?
3 Izinkinga ezingadala uma zingasetshenziswanga
Izici ezijwayelekile zezibuko zelanga zezintaba
Kubalulekile ukukhetha uhlobo lwezibuko ezivumelana nohlobo lwezemidlalo ozozijwayeza ngalo. futhi yini ukuvezwa unomphela amehlo akho azobhekana nakho ukuze uwavikele ngangokunokwenzeka. Akufanele sikhohlwe ukuthi singathola izibuko ezine-adaptha ebonakalayo emakethe uma kwenzeka sifuna ukuba namalensi kadokotela.
Ngokuvamile, izibuko ezihamba phambili zezintaba yilezo ezibambe kahle, okuyi bayakwazi ukushintsha ithoni yabo kuye ngobungako bokukhanya ivezwe futhi ine- ukwelashwa okulwa nenkungu. Kumele futhi bamake isigaba 4 nokuthi sihlukaniswe nge-photochromic.
Amalensi angenye yezinto ezibalulekile. Kufanele ukhethe ilensi enesigaba esiphakathi kuka-0 no-4, leli zinga lizosivumela inani lokumuncwa kokukhanya okubonakalayo elingakunikeza. Ukukunika umbono, ileveli 0 iyilensi ecishe ibonakale futhi ileveli 4 imnyama kakhulu, ilungele izindawo zezintaba ezineqhwa nezindawo ezinamanzi ezinokukhanya okuhle kwelanga. Akuseyona indaba yokuba nobumnyama obukhulu kunelensi, kepha ukuthi kuza nempatho enkulu kakhulu elwa ne-UV.
Imibala ingahluka ngokuya ngohlobo lwesidingo, lezo ze umbala oluhlaza zisivumela ukuthi sithwebule imibala kahle. Ezinsundu Zisisiza ukuhlunga imisebe eluhlaza okwesibhakabhaka kangcono kakhulu futhi zandisa ukujula kwensimu. Abaphuzi Zifanele izinsuku ezinamafu nezinokukhanya okuncane, kepha futhi kufanele zifake nokwelashwa okulwa ne-UV. Ezimpunga zinikeza ukufana ekukhanyeni futhi zihlonipha imibala yemvelo.
Amalensi Photochromic: Zilungele ezemidlalo ezifana nokuhamba ngebhayisikili, njengoba zivumelanisa kahle nokukhanya, ngaphandle kokuqaphela izikhala ezinamandla zokukhanya kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye.
Amalensi aqothuliwe: Basiza ukukhulisa ikhwalithi nombala wemvelo, benza umphumela wokulwa nokukhanya ezindaweni ezinamanzi neqhwa.
Kufanele ukhethe phakathi kwezingilazi ezikhanyayo nezikhululekile ezijwayela ukwakheka kobuso bakho, kunezinhlobo ezingenakubalwa ezimakethe ezingakuhlaba umxhwele.
Ngomoya omncane omuhle: Kufanele ucabangele ukungena komoya okuhle phakathi kwezibuko nobuso bakho, ukuze ukungaboni kahle kwamalensi kungaveli. Lokhu kuvame ukwenzeka ezindaweni ezinomswakama ophezulu nasebusika.
Ngama-sideburns amahle: lokho kuyenzeka futhi kubambelele kahle ekhanda. Uma uqeqesha imidlalo ezintabeni njengokukhwela noma ukuhamba ngebhayisikili, kubalulekile ukuthi amathempeli aqhubeke nokuma. Kulokhu kunezinye izesekeli zokubamba ezinjengezintambo.
Kungani izibuko zelanga zibaluleke kangaka ezintabeni?
Izibuko kufanele basivikele entweni eyingozi njengemisebe ye-UVB. Kufanele wazi ukuthi njalo ngamamitha ayi-1000 wokuphakama owenyuka intaba, imisebe ye-UVB inyuka ngo-10%. Kunezakhi emvelweni ezandisa lelo zinga lemisebe, njengeqhwa, ngoba likhombisa ama-80 kuya ku-90% wemisebe, ukukunika umbono indawo engenalo iqhwa ekhombisa ama-20%.
Imisebe yelanga iphindaphindwa ngo-1,5 kuya ku-2000 m ngaphezu kogu lolwandle, naku-2,5 kuye ku-4000 m. Kumele kuqashelwe futhi ukuthi izothambekela ngokwengeziwe kuye ngesizini yonyaka nangesimo semisebe yelanga. Imisebe iphezulu kakhulu ekwindla kunasentwasahlobo, inyuka ifike ku-25% ngaphezulu ngenxa yokukhula kongqimba lwe-ozone.
Izinkinga ezingadala uma zingasetshenziswanga
Izimpawu ezivame kakhulu imvamisa ukwehla kwe-macular, ngokuguga ngaphambi kwesikhathi kwazo zonke izicubu eziyingxenye yeso.
I-Pterifion: ukukhula okungajwayelekile kwesicubu esicasulayo okwenza ungqimba oluncane lwe-pink lube luyacasula futhi lilingane kuyacasula kakhulu.
Isifo i- "White out" Lesi sifo sivame ukuvela kakhulu uma kwenziwa imidlalo ebandayo ebandayo, ifinyelela iqabunga lamajwabu amehlo ngenxa yamazinga okushisa aphansi, futhi idale ukungaboni, i-photophobia ngisho necrosis engalungiseki.
Photokeratitis noma iqhwa ophthalmia, ngenxa yokuchayeka isikhathi eside emisebeni ye-UVB ebangela ukuguguleka kwamaseli amboza i-cornea yeso.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izibuko zelanga zentaba
Izipho zobudoda kakhulu ukuphatha kangcono ukuvalelwa